ဒီလို တွေ စဖြစ် တာ သိသိ ခြင်း သံပုရာ ရည် ကို ရေနွေးနွေး နဲ့ သောက် လိုက်ပါ – Shwe Ba
Shwe MM | August 25, 2020 | Health | No Comments
ဆေးရုံမှာ ကုသမှုခံ ယူရင်း ပြန်လည် ကောင်းမွန် လာသည့် လူနာများ၏ ပြောပြချက်…
1. ဗီတာမင်စီ – 1000 သောက် ရတယ် 2. ဗီတာမင် အီး သောက်ရတယ် 3. နံနက် 10:00 – 11:00 အချိန်အတော အတွင်း ၁၅ – ၂၀ မိနစ်ကြာ နေပူစာ လှုံပေးရတယ်။ 4. ကြက်ဥ ၁လုံး စားပေးရတယ်။ 5. အနားယူရတယ်။ အနည်းဆုံး ၇ – ၈ နာရီကြာ အိပ်ရတယ်။ 6. နေ့စဉ် ရေ ၁.၅ လီတာ (ရေသန့်ဘူးကြီး ၁ဗူးခွဲ) သောက်ရတယ်။ အစားအစာကို ပူပူနွေးနွေး စားရတယ်။ အစာ အေးနေလို့မရ။
ဆေးရုံမှာ အဲလိုတွေ နေထိုင် စားသောက်ရတယ်။ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ ပီအိတ်ခ်ျ pH အဆင့်ဟာ ၅.၅ ကနေ ၈.၅ အကြား ပြောင်းလဲ နေပါတယ်။ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကို တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ အတွက်ဆိုရင် ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ pH အဆင့်ထက် မြင့်တဲ့ အယ်လ် ကာလီဓာတ်ပိုမြင့်တဲ့ အစားအစာတွေကို စားသုံးပေးရမယ်။
အယ်လ်ကာလီဓာတ် ပိုမြင့်တဲ့ အစား အစာ အချို့ –
ရှောက်သီး – 9.9 pH၊ သံပုရာသီး – 8.2 pH ၊ ထောပတ်သီး – 15.6 pH ၊ ကြက်သွန်ဖြူ – 13.2 pH ၊ သရက်သီး – 8.7pH ၊ လိမ္မော်သီးမျိုး – 8.5pH ၊ – ဆန်းကစ်သီး ၊ နာနတ်သီး – 12.7 pH၊ ဒန်ဒလီယွန် – 22.7 pH ၊ လိမ္မော်သီး – 9.2 pH
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
1. လည်ချောင်းယားခြင်း 2. လည်ချောင်း ခြောက်ခြင်; 3. ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်း 4. ကိုယ်ပူချိန် မြင့်ခြင်း 5. အသက်ရှူကြပ်/ မဝခြင်း 6. အနံ့ အရသာ မတွေ့တော့ခြင်း
ဒီလိုတွေ စဖြစ်တာ သိတာနဲ့ ချက်ခြင်း သံပုရာရည် ကို ရေနွေးနွေးနဲ့ သောက်လိုက်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ နံနက် ၁၀နာရီ မတိုင်ခင်မှာ နေပူစာလှုံတာ ပိုကောင်းပါတယ်
ဆေးရုံမှာ ကုသမှုခံ ယူရငျး ပွနျလညျ ကောငျးမှနျ လာသညျ့ လူနာမြား၏ ပွောပွခကျြ…
1. ဗီတာမငျစီ – 1000 သောကျ ရတယျ 2. ဗီတာမငျ အီး သောကျရတယျ 3. နံနကျ 10:00 – 11:00 အခြိနျအတော အတှငျး ၁၅ – ၂၀ မိနဈကွာ နပေူစာ လှုံပေးရတယျ။ 4. ကွကျဥ ၁လုံး စားပေးရတယျ။ 5. အနားယူရတယျ။ အနညျးဆုံး ၇ – ၈ နာရီကွာ အိပျရတယျ။ 6. နစေ့ဉျ ရေ ၁.၅ လီတာ (ရသေနျ့ဘူးကွီး ၁ဗူးခှဲ) သောကျရတယျ။ အစားအစာကို ပူပူနှေးနှေး စားရတယျ။ အစာ အေးနလေို့မရ။
ဆေးရုံမှာ အဲလိုတှေ နထေိုငျ စားသောကျရတယျ။ ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈရဲ့ ပီအိတျချြ pH အဆငျ့ဟာ ၅.၅ ကနေ ၈.၅ အကွား ပွောငျးလဲ နပေါတယျ။ ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈကို တိုကျခိုကျနိုငျဖို့ အတှကျဆိုရငျ ဗိုငျးရပျဈရဲ့ pH အဆငျ့ထကျ မွငျ့တဲ့ အယျလျ ကာလီဓာတျပိုမွငျ့တဲ့ အစားအစာတှကေို စားသုံးပေးရမယျ။
အယျလျကာလီဓာတျ ပိုမွငျ့တဲ့ အစား အစာ အခြို့ –
ရှောကျသီး – 9.9 pH၊ သံပုရာသီး – 8.2 pH ၊ ထောပတျသီး – 15.6 pH ၊ ကွကျသှနျဖွူ – 13.2 pH ၊ သရကျသီး – 8.7pH ၊ လိမ်မျောသီးမြိုး – 8.5pH ၊ – ဆနျးကဈသီး ၊ နာနတျသီး – 12.7 pH၊ ဒနျဒလီယှနျ – 22.7 pH ၊ လိမ်မျောသီး – 9.2 pH
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျခံရကွောငျး ဘယျလိုသိနိုငျမလဲ
1. လညျခြောငျးယားခွငျး 2. လညျခြောငျး ခွောကျခွငျ; 3. ခြောငျးခွောကျဆိုးခွငျး 4. ကိုယျပူခြိနျ မွငျ့ခွငျး 5. အသကျရှူကွပျ/ မဝခွငျး 6. အနံ့ အရသာ မတှတေ့ော့ခွငျး
ဒီလိုတှေ စဖွဈတာ သိတာနဲ့ ခကျြခွငျး သံပုရာရညျ ကို ရနှေေးနှေးနဲ့ သောကျလိုကျပါ။ မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ နံနကျ ၁ဝနာရီ မတိုငျခငျမှာ နပေူစာလှုံတာ ပိုကောငျးပါတယျ